KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Baladweyne oo lagu Dagaalamay
Monday 7 May 2012 10:29
Baladweyne oo lagu Dagaalamay
Baladweyne (Keydmedia) - Dagaal Culus ayaa ka dhacay Magaalada Baladweyne dhexmaraynah Ciidamada Ciidamada dowlada KMG Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Itoobiya iyo Al Shabaab oo dhinac kale ah.
Dagaalka oo ka dhacay xaafada H/wadaag ayaa ka danbeeyey kadib marki ay xoogaga Shabaab weerar qorsheysan ku qaadeen saldhig ay ciidamada Itoobiya ku lahaayeen halkaasi.
Dagaalka ayaa socday daqiiqado waxaase uu aad u cabsi geliyey shacabka magaalada, inkastoo marki danbe ay xabada joogsatay.
Saraakiisha dowlada ee ku sugan magaalada Baladweyne ayaa ku tilmaamay dagaalka mid aanan wax qasaara ah kasoo gaarin xagooda, waxa kale oo ay sheegeen in ay carareen kooxihi soo weeraray.
Si cad looma oga qasaaraha ka dhashay dagaalka.